CAD for Myanmar: 2D-03: AutoCAD Basic Concept & Data Input
AutoCAD ကိုအသုံးချတဲ့အခါ Data Input ကိုမလွဲမသွေ ပေးရတော့မှာပါ။ ကျနော်တို့ လေ့လာ ကြည့်ရအောင် . . . ။
အလွယ်ဆုံး၊ အရှင်းဆုံးကတော့ Mouse နဲ့ Click လုပ်ပြီးပေးတာပါ။ လွယ်လွယ်“စ”ကြည့်ရအောင်လေ . . . ။
Menu: Draw > Line
Command: Line (Enter) စိတ်မရှည်ရင်လဲ “L” ပဲရိုက်လို့ရပါတယ်။ နောက်မှ Command Aliases တွေ သတ်သတ်တင်ပေးပါ့မယ်။ Case Sensitive လဲ မရှိပါဘူး။ ကြိုက်သလိုရိုက်လို့ ရပါတယ်။ LiNe လို့ရိုက်ရင်လဲ ရတာပါပဲ။ ကျနော်က Enter ထဲ့ပေးနေရတာကလဲ အဲဒီလိုမှ မပြောရင် တချို့က Command ရိုက်ပြီး Computer ကိုထိုင်ကြည့်နေတာ၊ အနှစ်နှစ် အလလက ကွဲနေတဲ့ ရည်းစားကို ပြန်တွေ့နေရသလိုပဲ။ မျက်လုံးတွေတောင် အရောင်တွေတောက်လို့။ ဘာများဖြစ်လာမလဲ မျှော်လင့်တာလဲ ပါမှာပေါ့လေ။ ဘယ်နှယ့် . . . Computer ဆိုတာ သူ့ကိုခိုင်းချင်ရင် သူ့ထဲကိုအမိန့်ပေးတဲ့ Enter လေးတော့ရိုက်ပေးမှ သူ့ခမျာသိရှာ ပေမပေါ့နော် . . . ။
ဒီအခါမှာ Command Prompt မှာအခုလို တွေ့ရမှာပါ။
Mouse နဲ့ Drawing Area ထဲက (Drawing Area လို့ကြိုပြောထားတယ်၊ ကြုံတဲ့နေရာမှာ တော့မရဘူးနော်) တနေရာမှာ Click ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် Mouse ကိုနေရာရွေ့ကြည့်တဲ့အခါ ကျနော်အောက်မှာ ဖော်ပြထားသလို တွေ့ရမှာပါ။
ကျနော်တို့က Mouse ကိုလှုပ်ရမ်းလိုက်ရင် တန်းလန်း၊ တန်းလန်းနဲ့ အမျှင်လေးကို သားရေကြိုးလေးလို လိုသလိုဆွဲဆန့်၊ ဆွဲကျုံ့နိုင်တဲ့အတွက် Rubber band လို့ခေါ်ပါတယ်။
နောက်ထပ်တနေရာမှာ Click ပေးကြည့်လိုက်ပါအုန်း။
ဆိုပြီး အဆုံးသတ်လိုက်ရအောင်။ ဒီနေရာမှာ Specify next point မှာ [Undo] ဆိုတဲ့ Option ပါလာတာ သတိပြုပါ။ ဘာလို့ ဒီလိုလုပ်ခွင့်ပေးသလဲဆိုရင် ကျနော်တို့က Undo ကိုရွေးလိုက်ရင် နောက်ဆုံး Action ဖြစ်တဲ့ First Point ချထားတာကိုပြန်ပြီး Neglect လုပ်ပေးလိမ့်မယ်။ Specify first point: တုန်းကတော့ Undo လုပ်စရာမှမရှိပဲကိုး။ ဘာမှ Option ပေးစရာလဲမရှိဘူးလေ။ ကဲ Line တခုအောင်အောင်မြင်မြင် ဆွဲနိုင်သွားပြီ။ တော်လိုက်ကြတာနော်။
တခါထပ်ဆွဲရအောင်။ Line command ထဲပြန်ဝင်ပါ။ Menu or Command Line or Toolbar ကိုယ်သန်ရာသုံးပါ။ စိတ်မရှည်ဘူးလား။ Enter or Spacebar ခေါက်လိုက်ပါ။ ဒါလဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုချင်တာက Enter or Spacebar ဟာ Previous Command ကိုပြန်ခေါ်တာပါခင်ဗျား . . . ။
Specify first point: တနေရာမှာ Click ပေးပါ။
Specify next point or [Undo]: နောက်တနေရာမှာ Click ပေးပါ။
Specify next point or [Undo]: နောက်ထပ် တနေရာမှာ Click ပေးပါ။
Specify next point or [Close/Undo]: c (Enter) ပေးပါခင်ဗျား။ ဒီတခါကျတော့ Command prompt ရဲ့လေးလိုင်းမြောက် Option မှာ Undo အပြင် Close ဆိုတာပါလာပြီနော်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အရှေ့မှာ 2-segments ဆွဲသွားပြီးတော့ 3-segments နဲ့ Polygon တခုဖန်တီးချင်ရင် ဖန်တီး နိုင်အောင်လို့ ပေးထားတာပါ။ Logic ကိုသတိပြုပါ။ AutoCAD က First Point ကိုမှတ်ထားတဲ့အတွက် Last Point နဲ့ဆက်ပေးလိုက်တာပါ။ အခုဆိုရင် ကျနော်အောက်မှာ ဖော်ပြထားသလိုမျိုး မြင်ရပြီမဟုတ်လား။
အထူးမှာချင်တာက “စ”လေ့လာတဲ့သူတွေအနေနဲ့ Command Prompt မှာ ပေါ်တာတွေကို အလေး ဂရုပြု ဖတ်စေချင်ပါတယ်။ Drawing Area ထဲမှာချည်း အာရုံမစိုက်ပါနဲ့။ တကယ်ကတော့ AutoCAD နဲ့ကျနော်တို့နဲ့ မေးလိုက်၊ ဖြေလိုက် လုပ်ပြီး ဆွဲကြရတာပဲမဟုတ်လား . . . ။
ဒီလောက်ဆို AutoCAD ရဲ့အထာ၊ အခြေခံလေးလောက်တော့ရပြီထင်ပါတယ်။ တကယ့် လက်တွေ့ Engineering Drawing တွေဆွဲတဲ့အခါကျတော့ တိကျမှုက လိုလာပြီ။ ဒီလို Mouse နဲ့လွယ်လွယ်ပေးလို့ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလေ။ ဒီတော့ စနစ်တကျ Data Input ပေးတတ်ရ တော့မယ်။
Data Input ပေးတဲ့အခါမှာ -
Absolute Coordinate က Origion (0,0) ကညွှန်းတာပါ။
Relative Coordinate ကနောက်ဆုံးရောက်နေတဲ့ Last point ကညွှန်းပါတယ်။
Absolute Rectangular Coordinate System
x,y – eg: 3,4
r<θ – eg: 5<30
@x,y – eg: @2,3
Relative Polar Coordinate System
@r<θ – eg: @3<25
Direct Distance Entry ဆိုပြီး နောက်ပိုင်း Version တွေမှာ ပါလာပါတယ်။ AutoCAD Release 14 က စပါတယ် ထင်ပါတယ်။ အတိအကျ မမှတ်မိတော့တာ ခွင့်လွှတ်ပါဗျာ . . . ။ Math မှာ Rectangular Coordinate Point တခုကို ပေးတဲ့ အခါ (x,y) နဲ့၊ Polar Coordinate Point တခုကို (r<θ) နဲ့ဖော်ပြလေ့ရှိပေမယ့် AutoCAD မှာဝိုက်ကွင်း (Parenthesis) ပါစရာမလိုပါဘူး။ ရိုက်ရသက်သာတာ ပေါ့ဗျာ . . . ။
ကျနော်တို့အခု5x4Rectangle တခုဆွဲကြည့်ရအောင် . . . ။ New Drawing တခုအသစ်ခေါ်ပြီး Zoom, Entents ယူထားလိုက်ပါ။ ဒါမှ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မြင်ရလိမ့်မယ်။ ပထမဆုံး Absolute Rectangular Coordinate နဲ့ ဆွဲကြရအောင် . . . ။ ကျနော်က Rectangle ရဲ့ Lower left corner ကို Absolute Coordinate 2,2 မှာထားမယ်။ Line Command နဲ့ပဲဆွဲမှာနော်။ ဒါလဲ ကိုယ်သန်ရာကြိုက်တာကိုသုံးနိုင်ဖို့ အထက်မှာရှင်းပြခဲ့ပြီးပြီ။ စာဖတ်သူက တတ်ပြီးသား ဖြစ်နေရင်လဲ သည်းခံပါ။ ကျနော်က လုံးဝမတတ်သေးတဲ့ သူတွေအတွက်ပဲ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ကဲ . . . လိုက်ဆွဲကြည့်ရအောင်နော် . . . ။ Command prompt ကိုတော့ မျက်ခြေမပြတ် ကြည့်နော်။ စပြီ . . . ။
Specify first point: 2,2 (Enter)
Specify next point or [Undo]: 7,2 (Enter)
Specify next point or [Undo]: 7,6 (Enter)
Specify next point or [Close/Undo]: 2,6 (Enter)
Specify next point or [Close/Undo]: 2,2 (Enter)
Specify next point or [Close/Undo]: (Enter) ဆိုရင် အခုလို Rectangle တခုရပြီပေါ့။
ရတော့ရသွားပြီ။ ဒါပေမယ့် ဒီလို Coordinate တွေကို တွက်ချက်ပြီးပေးနေရတာ သိပ်တော့ မနိပ်သေးဘူး။ Absolute Rectangular Coordinate မှို့လို့သာပေါ့။ ဒါတောင် Drawing တခုလုံးဆွဲဖို့ Coordinate တွေမှတ်ထားရမလိုဖြစ်နေပြီ။ တော်ပြီ AutoCAD လဲမတတ်ချင်တော့ဘူး၊ မလေ့လာချင်တော့ဘူးဆိုပြီး ထွက်မသွားပါနဲ့။ ဆက်ကြည့်ပါအုန်းလေ။ Absolute Polar Coordinate နဲ့ဆို Trigo တွေတောင် ပြန်တွက်ရတော့မယ်။ ဘယ်နှယ့် Computer ရှေ့မှာထိုင်ပြီး Calculator တလုံးနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေရမယ်ဆိုရင် လူမြင်လို့မှမကောင်းတာဗျာ။
ဒီတော့ Relative ဘက်ပြောင်းကြံစည်ကြည့်ရအောင် . . . ။ မကောင်းဘူးလား . . . ?
AutoCAD ကသူ့ရဲ့ Drawing Database ထဲမှာ Last Point ကိုအမြဲတမ်း မှတ်ထားလေ့ရှိတယ်ဗျ။ ဒီတော့ကျနော်တို့က Relative နဲ့ပေးရင် အဲဒီ Last Point ကနေဆက်ပြီး အလုပ်လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ Last Point ကိုရည်ညွှန်းဖို့အတွက် @ (at sign) လေးရှေ့ကထဲ့၊ ပြောင်းသွားတဲ့ Delta X, Delta Y တန်ဖိုး ထည့်ပေးလိုက်ရင်ပြီးပါတယ်။ Line Command ပဲသုံးမှာပါ။ ခင်ဗျားဘယ်လိုသုံးရမလဲ လူလည်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ အသေးစိတ် မပြောတော့ ဘူးနော်။ Rectangle ရဲ့ Lower left corner ကို 9,2 ကစမယ်။ စောစောကပုံနဲ့ ထပ်နေမှာစိုးလို့၊ ယှဉ်ပဲဆွဲကြရအောင်။ ကဲ . . . နောက်ထပ်လေး ကြိုးစား ကြည့်ကြစို့ရဲ့ . . .
Specify first point: 9,2 (Enter)
Specify next point or [Undo]: @5,0 (Enter)
Specify next point or [Undo]: @0,4 (Enter)
Specify next point or [Close/Undo]: @-5,0 (Enter)
ကျနော်တို့က Rectangle ရဲ့ Lower left corner ကို 9,2 ကစပြီးပေးတယ်။ ဒီမှာတင် Last point ကို 9,2 လို့သိသွားပြီ။ ဒါကြောင့်နောက် Lower right corner အတွက် Delta X က 5, Delta Y ကတော့0ပဲလို့ဆက်ပေးလိုက်တယ်။ တခါ Last point ကို Lower right corner ပြောင်းမှတ် ပြန်ရော။ ကျနော်တို့က အဲဒီက Relative ယူပြီး Delta X က 0, Delta Y က4လို့ထပ်ပေး လိုက်တယ်။ နောက်ထပ် Point ကိုပေးတော့ Delta X က Negative ဖြစ်ရပြီလေ။ X ရဲ့ Negative direction ဘက်ရောက်သွားပြီကိုး။ ဟဲဟဲ . . . ဒီတခါတော့ လူလည်ကျပြီး Close Option နဲ့ပိတ်လိုက်တယ်။ သတိထားမိလား။ ဘာကွာသလဲဆိုတာကို . . . ?
ပထမတခါဆွဲတုန်းက 2,2 ပြန်ရိုက်ပြီး အတိအကျပေးလိုက်တယ်။ ဒီတော့ Command Line ကို ပြန်မထွက်ဘူး။
Specify next point or [Close/Undo]: မှာ ဘာမှမပေးပဲ Enter ခေါက်လိုက်မှ ထွက်သွားတယ်။
အခုတော့ Close Option လဲသုံးလိုက်ရော တခါတည်း Command Line ကို ပြန်ထွက်သွားတယ်။ AutoCAD ကသူ့တာဝန်ပြီးပြီ။ နောက်ထပ်ဘာမှ လုပ်စရာ မလိုတော့ဘူးလို့ နားလည်တယ်လေ။ ကျနော်တို့ အလိုရှိသလို ခိုင်းနိုင်ဖို့ AutoCAD ဟာ Command Line မှာအမြဲတမ်းအဆင်သင့် ဖြစ်နေရမယ်လေ။ ဒါကလဲအလေးဂရုပြုရမယ့် အချက်ပါ။ နောက်တခုကွာခြားတာက ပထမ တုန်းကလို Coordinate point အတိအကျပေးတော့ Last point ကို First point ဖြစ်တဲ့ 2,2 လို့ Database မှာမှတ်တယ်။ နောက်တခါလို Close option နဲ့ ပိတ်တော့ Lower left corner ကိုမမှတ်တော့ပဲ Fourth point ဖြစ်တဲ့ Upper left corner ကိုပဲမှတ်တော့တယ်။ ဘာလဲ . . . မယုံဘူးလား။ နှစ်မျိုးစလုံး ပြန်ဆွဲကြည့်။ (ညာပြီး နှစ်ခါလေ့ကျင့်ခိုင်းတယ်ထင်ရင် မငြင်းဘူးနော်) ပြီးရင် Command Line မှာ Lastpoint လို့ပထမနည်းနဲ့ဆွဲပြီးရိုက်ကြည့်၊ ဒုတိယနည်းနဲ့ ဆွဲပြီးရိုက်ကြည့်ရင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ Lastpoint Command က One word နော်။ ဒီအခါမှာ AutoCAD ရဲ့ Database ထဲမှာမှတ်ထားတဲ့ Last point ကို တွေ့ရ ပါလိမ့်မယ်။ Less than နဲ့ Greater than နှစ်ခုကြားက Value ပါ။ Command line မှလွဲပြီး ဘယ် Menu, ဘယ် Toolbar ပေါ်မှာမှ မရှိပါဘူး။ ဒါဟာ AutoCAD ရဲ့ System Variable တခုပါ။ AutoCAD ကိုထုတ်လုပ်တဲ့ Autodesk ကိုယ်တိုင်က Command Line ကိုပဲအလေးထားပါလို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ် ခင်ဗျား။ နောက်တော့လဲ System Variables တွေအကြောင်းဆွေးနွေး ကြတာပေါ့။ အခုတော့ ပညာလောဘတွေ ခဏသိမ်းထားပါအုန်း။
ကဲ . . . အခုလိုတွေ့နေရပြီမဟုတ်လား . . . ။
ကဲ . . . ဘယ်လောက်ကျေနပ်စရာကောင်းသလဲ။ ခင်ဗျားဟာ Creator ဖြစ်နေပြီနော်။ ပျောက်ပျက်သွားမှာ စိုးသတဲ့လား။ သိမ်းထားလိုက်ပေါ့။ ဘယ်လို သိမ်းမလဲဆိုတော့ . . .
Menu: File > Save or Save As . . . (တခါမှ မသိမ်းဘူးတော့ အတူတူပါပဲ)
Command: Save (Enter)
ပြီးရင် ခင်ဗျားအလိုရှိတဲ့ Folder အောက်မှာ ကြိုက်တဲ့နံမည်နဲ့ သိမ်းပေတော့။ ကျနော် ဖြစ်စေချင်တာကတော့ 2D-03 နံမည်ပေးစေချင်ပါတယ်။ ခင်ဗျား နောက်ပြန်လေ့လာဖို့ အတွက်ပါ။ ပြိးရင်တော့ စိတ်ချလက်ချ Close သာ လုပ်ထားလိုက်ပါဗျာ။ အချိန်မရွေး ပြန်ဖွင့်လို့ရနေတာ ဘာအရေးလဲ။ RAM လေးတယ် . . . ။
ဒီ5x4Rectangle လေးအကြောင်းဆက်အုန်းမယ်။ အခု Absolute Rectangular Coordinate နဲ့လဲဆွဲပြီးပြီ။ Absolute Polar Coordinate နဲ့ဆိုပိုဆိုးမယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်လို့ Relative Rectangular Coordinate နဲ့ ကြိုးစားကြည့်ခဲ့ပြီးပြီ။
အခုတခါ Relative Rectangular နဲ့ Relative Polar ဘယ်လိုကွာသလဲ ဆက်ကြည့်ကြရအောင် . . . ။
ကဲ နောက်ထပ် New Drawing လေးခေါ်ပြီး Zoom, Extents လုပ်ထားလိုက်ပါအုန်း။ Wise Guy ကြီးက မောင်းတယ်ဟဆိုပြီးလဲ စိတ်မဆိုးကြပါနဲ့အုန်းနော်။
ဒီတခါက ဒီလို . . . ဒီလိုလေ။
Command: LINE Specify first point: (Drawing Area ထဲက ကြိုက်ရာနေရာ တနေရာရာကို Click ပေးလိုက်ပါ)
Specify next point or [Undo]: @5<0
Specify next point or [Close/Undo]: @5<180
Specify first point: မှာကြုံတဲ့နေရာ Click ပေးလိုက်တော့ Last point လို့ မှတ်သွားပြီ။ ဒီကဆက်လို့ Relative နဲ့ပေးတဲ့အခါ အဲဒီ Last point ကပဲ ဆက်စပ်ပြီး Radius နဲ့ Angle ကိုဆက်ပေးလိုက်တာပါ။ @5<0 ဆိုတာက Last point ကနေ Radius အားဖြင့်5unit, Angle အားဖြင့်တော့0လို့ပြောတာပါ။ ဒီတော့ Lower right corner က Last point ဖြစ်သွားပြီ။ ဒါကြောင့် အဲဒီက ဆက်ညွှန်းတဲ့အခါ Radius က 4, Angle က X ရဲ့ Positive Axis ကညွှန်းရင် 90 Degree (Default အတိုင်းယူရင်ပေါ့)။ ဒီကမှတခါထပ်ယူတော့ Radius က 5, Angle က 180 ပဲပြောပြော၊ -180 ပဲလက်အညောင်းခံရိုက်ရိုက် အတူတူပဲလေ။ ပြီးတော့ လူလည်ကြီးသားသမီး လုပ်ပြီး Close option နဲ့ပိတ်ချလိုက်တာပါ။
5 x4Rectangle လေးပဲရမှာမှို့ ပုံမပေးတော့ ဘူးနော်။ ဖြစ်တယ်မဟုတ်လား . . . ။
ဟား . . . တော်တော်လေးရနေပြီနော် . . . ။
နောက်တနည်း Direct Entry နဲ့ကြည့်ရအောင် . . . ။
Direct Entry ဆိုတာက ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Direction ကို Mouse နဲ့ပြ၊ ပြီးရင် Magnitute ရိုက်ထဲ့ရတာပါ။ ကဲ . . . ပြောနေကြာပါတယ်။ လွယ်လွယ်လေး “စ”လိုက်ကြရအောင် . . . ။
Command က Line ပဲသုံးမှာပါ။ ခင်ဗျားရယ်နေပြီပေါ့ . . . ။ ဒီ Command လောက်များ “အေးဆေး” သုံးတတ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ . . .
ကဲ . . . စမယ်။
Specify first point: ကြုံတဲ့တနေရာရာမှာ Click ပေးလိုက်ပါ။
Specify next point or [Undo]: မြင်နေရရင် ညာဘက်တည့်တည့်ကို Mouse pointer နဲနဲရွေ့လိုက်ပါ။ အဲဒီမှာ Direction ကို X နဲ့ Y အတိုင်း တည့်တည့်ထားဖို့ ခက်နေပြန်ရောလား။ လွယ်မှမလွယ်ပဲကိုး။ မလွယ်ဆို မသိလို့ကိုး။ သိရင်လွယ်လွယ်လေး . . . ။ F8 ကိုပဲနှိပ်နှိပ်၊ Status bar ပေါ်က ORTHO ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ON လိုက်ပါ။ ဒီအခါမှာ ကျနော်တို့ရဲ့ Rubber band ဟာ X နဲ့ Y directions တခုခုမှာပဲနေနေပါလိမ့်မယ်။ Mouse ကို First point ရဲ့ ပတ်ပတ်လည်မှာ နဲနဲ ကစားကြည့်ရင် သဘောပေါက်မှာပါ။ သူ့ကိုထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ရင် ဆွဲဖို့လွယ်သွားပြီနော်။ ကဲ . . . Direction ကို ညာဘက်ပြထား၊ ပြီးတော့ . . .
Specify next point or [Undo]: မှာ5(Enter)
နောက် Mouse ကိုအပေါ်ဘက်ပြထား . . .
Specify next point or [Undo]: မှာ4(Enter)
နောက် Mouse ကိုဘယ်ဘက်ပြထား . . .
Specify next point or [Close/Undo]: မှာ5(Enter)
ဆိုရင် အလိုရှိတဲ့5x4Rectangle ရပြီပေါ့။
ဟား . . . Direct Distance Entry ကဒီလောက်လွယ်၊ ဒီလောက်ကောင်းတာ စောစောက မပြောပဲနဲ့ အခုမှပြောရသလားဆိုပြီး အနားမှာ Wise Guy ရှိနေရင် ရိုက်များရိုက်ချင်နေမလား မသိဘူးနော်။ ရွှေစိတ်တော်မညိုပါနဲ့ခင်ဗျား။ ဒီနေရာသာကောင်းပေမယ့် နေရာတိုင်းမကောင်း၊ နေရာတိုင်းသုံးလို့မရတာ နောက်တော့သိပါလိမ့်မယ် . . . ။
ကဲ . . . Data Input ပေးတတ်ပြီဆိုတော့ အောက်မှာပြထားတဲ့ Exercises လေးတွေကို ဆွဲကြည့်လိုက်ပါဦး။ ပြီးရင် သိမ်းထားဖို့လဲ မမေ့နဲ့နော်။ ပြီးမှမဟုတ်ဘူး။ ဆွဲနေရင်း သိမ်းသိမ်းသွား။ မီးပျက်သွားမှဖြင့်ဗျာ . . . ။
Posted by WISE GUY at 1:37 PM